Blog-Tipping: ဥစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဇူလိုင်လ 17, 2007 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 20, 2012 Douglas Karr
ဥစျေးကွက်အကြောင်း: Susan Payton သည်ဥစျေးကွက်၏စီမံခန့်ခွဲမှုပါတနာဖြစ်သည်။ သူမသည်ဗဟို Arkansas တက္ကသိုလ်မှ MBA ဘွဲ့ရှိပြီးအင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်ဘာသာတို့တွင် BA ဘွဲ့ရှိသည်။ Susan သည်စာရေးဆရာအဖြစ်ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူ၏တီထွင်နိုင်စွမ်းကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ ဘဏ္financeာရေးနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ဗဟုသုတနှင့်အသုံးချနေသည်။
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုသန့်ရှင်းတဲ့သတင်းစာလို့ငါခံစားရတယ်။ အပြင်အဆင်ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်သန့်ရှင်းပြီးကျယ်ဝန်းပါတယ်။ RSS မှာဒါမှမဟုတ် Email link ကို Subscribe လုပ်ရန်သင်၏ nav ဘားတွင်အခွင့်အရေးရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သင်၏ Home နှင့် About link မ်ားကို left-justifying လုပ်၍ subscription form နှင့် RSS icon ကို right-justifying လုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ မဟုတ်ပါ nav bar သည်ညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိသည့်ညာဘက်အောက်ထက်ပိုပါက။
ငါ RSS icon ကိုအကြံပြုပါသည် ဆိုဒ်အများစုသည်စာမျက်နှာ၏အပေါ်ဘက်နှင့်ညာဘက်ခြမ်းရှိ 'အထက်ဖက်' တွင်ရှိသော… scrolling လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ယခုဘရောင်ဇာအများစုတွင် RSS စွမ်းရည်များပါ ၀ င်သော်လည်းလူအများစာရင်းပေးသွင်းရန်အတွက်အိုင်ကွန်သင်္ကေတမှာလုပ်ဆောင်ရန်သိမ်မွေ့သောခေါ်ဆိုမှုဖြစ်သည်။
serif ဖောင့်လုပ်သည် စာဖတ်ခြင်းအတွက် serif ဖောင့်များနှင့်မရင်းနှီးပါ။ သို့သော်ဝဗ်ပေါ်ရှိဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရန်အတွက် serif ဖောင့်များကိုသင်မကြာခဏရှာလေ့ရှိသည်။ ဘာကြောင့်လဲဒါပေမယ့်ငါလည်းမသုံးဘူး။ လျော်ကြေးပေးရန်ကျွန်ုပ်၏စာလုံးအရွယ်အစားကိုဖတ်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။ မော်နီတာတွေပိုကြီးလာတာနဲ့အမျှ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာစာလုံးအရွယ်အစားကျလာတာတွေ့ရတယ်။
ယခုတွင်မော်နီတာများသည်အလွန်မြင့်မားသောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့်ကြီးမားသည် - စာလုံးအရွယ်အစားသေးငယ်။ ဖတ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲစေသည်။ ကျနော်တို့စက်ဝိုင်းအပြည့်အဝလာပါတယ် စုံတွဲတစ်တွဲအရွယ်အစားသင့်ရဲ့စာလုံးအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ သင်၏စတိုင်ဇယားတွင် font-size: 13px သို့ #contentmiddle သို့ထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဗဟို pane အတွက်သာပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤအကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်ပြုသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သည်ကိုအမြဲတွေ့ရသည်။ သို့သော်၊ သင်၏အကြောင်းအရာအတွင်း၌ခေါင်းစဉ်များ (h2 နှင့် / သို့မဟုတ် h3) ကိုပိုမိုအသုံးပြုရန်နှင့်ကျည်ဆံစာရင်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုချင်ပါသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ လူတွေဟာဘလော့ဂ်တွေနဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုသူတို့ချုံ့တာလောက်မဖတ်တတ်ကြဘူး။ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ် အတုံးအတစ် ငါတို့အကြောင်းအရာ။ ဘလော့တစ်ခုစီကိုအရိုးစုအဖြစ်ယူမှတ်ပါ။ ဦး ခေါင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်၊ ခြေထောက်များနှင့်ခြေထောက်များအတွက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုထည့်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏နံရိုးအတွက်ကျည်ဆံအချို့ထည့်ပါ။ သင်၏အလုပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သောအခါ၊ ဆောင်းပါးကိုချန်သည့်အခါသေချာစေရန်၊ စာမူတိုင်းကိုအမှန်တကယ်ဖတ်ခြင်းမရှိဘဲစာမူတစ်ခုလုံးကဘာကိုကြိုးစားနေသည်ကိုသင်နားလည်နိုင်သည်။
ခေါင်းစဉ်များ၊ ကျည်ဆံများနှင့်အတူ - သင့်တင်ပို့ချက်များကိုခွဲခြားရန်ပုံများသုံးရန်သေချာပါစေ။ သင်၏ဘလော့ဂ်၏ဗေဒအားလုံးရှိသည့်စာဖတ်သူမှသင်၏စာဖတ်သူများကိုသင်၏စာဖတ်သူများဖတ်နေစဉ်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်
ထွက် filtered ။ တစ် ဦး ကဓာတ်ပုံကိုတစ်ထောင်စာဖတ်သူများကျိုးနပ်သည်! ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်။ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်အနည်းငယ်ကိုပုံတစ်ပုံမပါဘဲတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်မှကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ချက်ချင်းတသမတ်တည်းတိုးတက်မှုရှိကြောင်းငါသတိပြုမိခဲ့သည်။
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို ၀ င်ရောက်ရန်အကြံပေးပြီးလား။ သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်သို့ရွှေ့ပြောင်းရန်သို့မဟုတ်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုဗဟိုဖြစ်ရန်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုအသုံးချရန်များစွာလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။ ယနေ့ခေတ်လမ်းကြောင်းသည်နှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းနေသည်။ ဘလော့ဂ်များသည်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများနှင့်ပိုမိုဆင်တူသည်၊ ဆိုဒ်များတွင်ဘလော့ဂ်နည်းစနစ်များကိုပိုမိုအသုံးပြုနေသည်။ ငါခေါ်အတော်လေးခဏတစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိခဲ့ပါတယ် ကရင်လူမျိုး။ ပို့စ်အတော်များများအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်ကိုကျွန်ုပ်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ပိုမိုလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သင်လည်းအလားတူတွေ့လိမ့်မည်။
နိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်၊ သင်၏စာအုပ်အားသင်၏ဘေးဘား၌လင့်ခ်တစ်ခုတင်ရန်သေချာစေပါ။ မင်းစာအုပ် ၁၀၁ လုပ်ငန်းရှင်သိကောင်းစရာများ, သင်သည်အခွင့်အာဏာကိုဆက်လက်တည်ဆောက်သွားသည်နှင့်အမျှသင်၏ဘလော့ဂ်၏အသံကိုများစွာယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ သင်၏ဘလော့ဂ်သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်သင်၏ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်။
၎င်းကော်လံရှိအဖြူရောင်နေရာအချို့ကိုလည်းယူလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုပေါ်မှာပေါ်မှာ pinging မဟုတ်ပါဘူး - သင်ဖြစ်ကောင်းနေဆဲဆောင်ပုဒ်အပေါ်အလုပ်လုပ်နေပုံရသည်!
သင်၏ခေါင်းစဉ်များ၌ meta tag များထပ်တူပြုသည်ကိုကျွန်တော်သတိပြုမိခဲ့သည် - သို့သော်သော့ချက်စာလုံးများသည်ကွက်လပ်ဖြစ်နေသည်။ ငါစုံတွဲတစ်တွဲကိုအကြံပြုပါလိမ့်မယ် meta tag plugins များ ငါယခင် post ကိုအပေါ်အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်။
ဒါကခဏလောက်အလုပ်များနေစေသင့်တယ်။ ဤပြောင်းလဲမှုအချို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်သင်၏ဘလော့ဂ်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ စိတ်ရှည်ပါ! ဘလော့ဂ်ရေးရာတွင်အောင်မြင်မှုမှာအားလုံးဖြစ်သည် ပါဝင်မှု, စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြခြင်းနှင့်အရှိန်အဟုန်!။ ကျေးဇူးပြု၍ သူစိမ်းတစ်ယောက်မဖြစ်ရန် - ၎င်းသည်မည်သို့တိုးတက်နေသည်ကိုပြန်ကြားချင်ပါသည်။
Tags: Blog အကြံပေးချက်များဥစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ်